Goormay Hoteeladu noqdeen Golihii Baarlamanka? By Amir Bidde
(Hadhwanaagnews) Sunday, February 10, 2019 07:34:28
Waxaa la yaab leh in wasiirka ku caan baxay kala hadalka iyo dood-raqiiska inuu miisinayaddii qaranka ee 2019 keenay Hotel Maansoor Hargaysa.
Waxaa la yaab leh
in wasiirka ku caan baxay kala hadalka iyo dood-raqiiska inuu miisinayaddii qaranka ee 2019 keenay Hotel Maansoor Hargaysa. Si halkaa uga doodaan dad aan loo igman ha noqdaan kuwaasi kuwo ka socda Xisbiyada qaar (sida xoghaya Waddani) ama kuwo aan xataa xisbi ka socon ee ku caan baxay social media (sida Ina Mooge). Xisbiyadu waxay leeyihiin xildhabaano loo doortay baarlamaanka, halkaasayna dooddooda ka dhiibtaan, fikradahooda iyo toosinta xukuumaddana ka soo jeediyaan, iyagoo xasaanada ay leeyihiin iyo xilka loo igmaday xeerinaya.